Ikhephu yingxaki yakutshanje kwiVenkile entsha yeApple eChicago | IPhone iindaba
Ikhephu yingxaki yakutshanje kwiVenkile entsha yeApple yaseChicago
Kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye ngoku i-Apple Store eyaziwayo ebekwe kuMlambo iMichigan waseChicago, yavula iingcango zayo. Ngexesha leentsuku zokuqala zokusebenza, amaqela ahlukeneyo athi izibane ngaphakathi kwiVenkile yeApple bazibhidanisa iintaka kwindalo esingqongileyo, neziphelela ekufeni xa zingqubana neekristale ezinkulu ezenza inxalenye yevenkile.
Kodwa kubonakala ngathi ayisiyiyo kuphela "ingxaki" ethi le nkampani ibonise indalo. Ngokutsho kwebhlog yaseChicago Spudart, iVenkile entsha yeApple unengxaki ngomkhenkce nakwikhephu eliqokelela eluphahleni lweVenkile yeApple kuba ngokucacileyo ngomnye umba ongakhange uthathelwe ngqalelo xa uyilwa.
Ivenkile entsha yeApple eChicago yenzelwe ngaphandle kokuthathela ingqalelo ubusika obuqatha kule ndawo, kuba azikho iigatha ezinoxanduva lokubamba ikhephu elinyibilikayo, njengoko isenzeka, iwela macala omabini evenkile, inyanzelise abasemagunyeni babeke uthango lokhuseleko kwivenkile yonke, ukuze thintela iqhekeza lekhephu ekuweleni kumntu odlulayo kuloo ndawo.
Kuyamangalisa ukuba ngotyalo-mali lokuqala lwe-62 yezigidi zeedola, ekugqibeleni eyancitshiswa yaya kwi-27 yezigidi zeedola, le Ivenkile entsha yeApple ihlupheka kwezi ntlobo zemiba yoyilo, ngakumbi eyokugqibela, kuba yingxaki enokuthi ithathelwe ingqalelo ngokubeka iidrafti zoyilo ezingachaphazeli ubuhle bevenkile okanye ukuzihlanganisa nophahla, kodwa kubonakala ngathi isitudiyo sokwakha seZeller Realty Group sasikwenye into ngelixa yayilelwe le Apple Store yasentsomini eChicago.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Ikhephu yingxaki yakutshanje kwiVenkile entsha yeApple yaseChicago
Uya kulamba ngelixa ebhala ...
Ngokwesiqhelo ukuba akukho cannelloni, bonke bazitya kumnyhadala weSant Esteve eCatalonia.
Phendula kwi fanalAir
"Yenzelwe", kumgca wokugqibela, ndicinga ukuba ufuna ukubeka uyilo
Uphahla lwevenkile luyilwe kakuhle. Ngapha koko, inezifudumezi ezithintela ikhephu ekuqokeleleni kwaye ineenkqubo ezenza ukutyibilika kwamanzi kungena ngaphakathi kwiikholamu zesakhiwo. Ngeli xesha kodwa banengxaki yesoftware ethintele ukusebenza ngokuchanekileyo kwenkqubo, ebangele ukuyilwa kwe-ice stalactites ezazifihliwe.
Kukho ithuba elingama-40% lokuba iApple izakufumana iNetflix, ngokutsho kwabahlalutyi
Yintoni esinokuyilindela kwi-Apple kwi-2018